Posted by Tranquillus | Jul 25, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny torohevitra momba ny fampivoarana matihanina dia karazana fanampiana atolotra ny olona mavitrika maniry ny hanana hevitra mazava momba ny toe-javatra misy azy ireo. Ireo fikambanana nahazo lalana dia mitantana ity rafitra ity. Mandritra ny fotoam-pivoriana, ivelan'ny ora fiasanao, miaraka amin'ny mpanolotsaina hevitra. Azonao atao ny mamaritra ny tetik'asa matihanina vaovao ary handray soa amin'ny torohevitra momba ny fampiharana izany. Ity no fotoana ahafahanao manapa-kevitra tsara noho ny torohevitry ny matihanina iray. Izany rehetra izany dia maimaimpoana.
Torohevitra momba ny fampandrosoana matihanina: ny antontan-taratasy famintinana
Ny torohevitra momba ny fampivoarana matihanina dia miorina amin'ny dinidinika manokana, izany hoe manokana. Ho afaka hanana torohevitra azo ampiharina ianao ary toro-lalana ahafahanao mamolavola sy manatanteraka tetik'asa matihanina. Mifototra amin'ny fahaizanao sy ny traikefa anananao.
Ny fikojakojana ny fanatanterahana dia tsy maintsy mitarika amin'ny fanomanana antontan-taratasy famintinana. Mandray anjara lehibe amin'ny fahombiazan'ny fanohanana izany. Miasa ho toy ny teboka fanamarihana mandritra ny fotoam-pankasitrahana izany noho ny fampahalalana tena ilaina ao anatiny.
Noho izany, io antontan-taratasy io dia maneho ny paikady azo ampiharina izay tonga amin'ny endriny samihafa, ankoatry ny hafa, ny fahafahan'ny fidirana amin'ny fiofanana mendrika ho an'ny CPF (kaonty fampiofanana manokana). Marihina fa ny mpampiasa CEP rehetra dia afaka manana ity kaonty ity. Izany dia mamela ny fidirana mora sy hahazo tombony amin'ny torohevitra fampandrosoana amin'ny matihanina. Ireo rafitra roa ireo dia mifameno, indrindra ho an'ny mpiasa sy mpiasam-panjakana.
Ny fandrosoan'ny fanohanana CEP
Ny fizotran'ny fampianarana ho an'ny fampandrosoana ho an'ny matihanina dia miovaova arakaraka ny lohahevitra iray hafa. Ny mpitari-dalana noho izany dia tokony hiezaka ny hahafantatra anao bebe kokoa: ny maha-izy anao, ny asanao, ny haavon'ny fahalalanao, ny fiainanao ara-tsosialy, ny fahazaranao, ny zavatra niainanao samihafa.
Raha ny marina dia manana ny fiaviany manokana ny mpahazo tsirairay avy ary noho izany ny fanohanana manokana. Ny mpanolotsaina momba ny referral, araka ny tondroin'ny anarany dia tsy tokony hametraka ny heviny aminao. Tsy maintsy mitari-dalana sy manoro hevitra anao izy. Manampy amin'ny famaritana tetikasa matotra matihanina ianao. Izany dia tsy maintsy mitarika amin'ny fampandrosoana mivaingana. Mba hahatratrarana izany, ny mpanazatra dia mampiasa ny fitaovana rehetra misy, ao anatin'izany ny zavatra niainany.
Farany, mandritra ny fanohanan'ny CEP, ny andraikitry ny mpanolotsaina dia manana adidy hanamarina ny safidy momba ny fiofanana miaraka aminao, raha ilaina izany. Hanampy anao koa ny famatsiana ara-bola ho an'ny fanamby vaovao anananao. Ary hanambara aminao ny zonao amin'ny fanatanterahana ny tetik'asa.
Ny tanjona dia ny hitarika anao hahomby. Ny andaniny na ny ankilany, izany hoe ny mpanolotsaina ary ny lohahevitra tohana dia tsy maintsy mametraka tanjona manokana sy azo refesina.
Iza no mahazo tombony amin'ny toro-hevitra fampandrosoana?
Ny torohevitra momba ny fampandrosoana momba ny asa dia natao ho an'ny olona mavitrika, dia ny mpiasa amin'ny sehatry ny daholobe, mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina, mpiasa miasa, mpanao asa tanana ary mpikaroka amin'ny asa.
Olona izay manao asa liberaly, tanora miala amin'ny sekoly misy na tsy manana diplaoma. Ny olona samy miasa any ivelany dia miahiahy ihany koa. Mba hidirana amin'io karazana fanohanana io dia ny fangatahanao ihany no azonao atao.
Raha mbola mpianatra nefa efa miasa. Ny torohevitra momba ny fandrosoana matihanina dia ahafahanao mirotsaka tsikelikely amin'ny tontolon'ny asa miasa raha manohy manatsara ny fahaizanao amin'ny sehatry ny asanao ianao. Toy izany koa ho an'ireo olona misotro ronono te hiditra amin'ny fandraharahana, ohatra.
HAMAKY Fepetra momba ny fidirana sy fepetra momba ny visa sy pasipaoro ao Frantsa
Eny tokoa, ny CEP dia manamboatra fitaovana manokana sy malalaka afaka alehan'ny olona mavitrika na tsy manana asa. Atolotry ny matihanina za-draharaha izay manao fanohanana feno ao amin'ny tsiambaratelo. Ny torohevitra natolotra dia mbola miafina. Toy izany koa ny fampahalalana rehetra momba ny mpahazo tombontsoa.
Ny vatan'ny CEP no nomena alalana azy
Tsy izay rehetra mpahazo ny toro-hevitra momba ny fampandrosoana matihanina dia manana toe-javatra mitovy amin'izany. Tsy maintsy miantso vatana CEP manam-pahefana izy ireo, araka ny tranga misy azy ireo avy.
Ireo fikambanana nahazo alalana hanome ity karazana serivisy karatra ity dia ny Asa asa, ho an'ny olona sembana rehetra, ny Misiônera eo an-toerana, ny ivon-toeram-piasana sy ny Fikambanana ho an'ny asan'ny mpanatanteraka na Apec.
Mariho fa ny mpiasa iray dia manana zo hahazo tombony amin'ny toro-hevitra fampandrosoana amin'ny matihanina nefa tsy mangataka alalana amin'ny mpampiasa azy. Izy dia tsy maintsy manao fanendrena miaraka amin'ny mpanolotsaina iray, tsara kokoa miaraka amin'ilayAPEC raha miasa toerana fitantanana eo amin'ny orinasa izay iasany.
Ho an'ny mpiasa tsotra tsy ekena, dia afaka mifandray amin'ireo mpanolotsaina matihanina amin'ny Komity mpiara-miasa eo amin'ny faritra na CPIR.
Farany, tsy maintsy ampahafantarin'ny mpampiasa ny mpiasany ny mety hahazoany tombony amin'ny toro-hevitra amin'ny fampandrosoana momba ny matihanina. Azon'izy ireo atao izany amin'ny fotoana rehetra (mandritra ny dinidinika asa na mandritra ny fivoriana mandritra ny fotoana maharitra na mahazatra, sns).
Ny toe-javatra izay mahasoa ny fampiasana CEP dia tena mahasoa anao
Ilaina ny mitady toro-hevitra fampandrosoana amin'ny matihanina amin'ny sehatra manokana. Mandalo fotoan'ny tetezamita matihanina ianao. Te hiandrasa ny fihetsiketsehana matihanina ianao na ny serivisy serivisy mety hamindra. Mieritreritra ianao ny hanomboka na haka orinasa iray.
Ireo toe-javatra ireo dia fotoam-pifaliana mahafinaritra. Ny torohevitra sy fanampiana matihanina dia tsy hahasoa ihany. Ary hamonjy anao be dia be ny olana izay tsy noeritreretinao.
Teo alohaNy kaonty fampiofanana manokana (CPF)
manarakaLazao ny fialanao amin'ny fialan-tsasatry ny mpampiasa anao
Torohevitra amin'ny fanokafana kaonty any Frantsa